Xooghayaha guud ee QM oo Ergay cusub u soo magacaabaya Soomaaliya - Halbeeg News
Xooghayaha guud ee QM oo Ergay cusub u soo magacaabaya Soomaaliya
NEW YORK (HALBEEG)- Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in uu soo magacaabayo ergay cusub oo madax ka noqon doona howlgalka kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya( UNSOM).
“Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay waxa uu aad ugu xun yahay go’aanka ay dowladd federaalka Soomaaliya ku tilmaamtay qof aan dalka laga rabin ergayga xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo ahaa madaxa howlgaladakaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom” ayaa lagu yiri warbixin laga soo saaray xafiiska warfaafinta ee Qaramada Midoobay.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in uu aad ugu kalsoon tahay khibradda iyo shaqada Nicholas Haysom isaga oo ku tilmaamay diblumaasi si weyn dunida looga tixgeliyo xilal sarsarena ka soo qabtay xarunta dhexe ee Qaramada Midoobay.
“Arrinta la xiriirta inaan ergay Qaramada Midoobay u shaqeeya laga rabin dalka kuma habooneyn Nicholas Haysom. Sida ku xusan heshiiska Viena ee xiriirka caalamiga ah, waxaa kaliya la ceyrin karaa ergayga ay dowlad u magacowdo dowlad kale si uu uga shaqeeyo xiriirka ka dhexeeya labada dowladood” ayaa lagu yiri warbixinta.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in uu tixgelinayo rabitaanka iyo baahida shacabka Soomaaliyeed, rabitaankoodana uu hogaaminayo howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya.
“Xogheyaha guud oo qadarin u haya shacabka Soomaaliyeed iyo shaqada adag ee hortaalla xafiiska qaramada midoobey ee Soomaaliya waxaa uu go’aansaday inuu magacaabo ergey cusub” ayaa ugu danbeyn lagu yiri warbixinta.
Beelihii ku dagaallamay Kaxandhaale oo lagu heshiisiinayo Caabudwaaq